१५-२० बर्ष बढी जेठा/कान्छा रहेका चर्चित नेपाली सेलिब्रेटी जोडी - Reel Mandu
१५-२० बर्ष बढी जेठा/कान्छा रहेका चर्चित नेपाली सेलिब्रेटी जोडी
आजभोलि नेपाली समाजमा विवाहको कुरा चल्दा केटाको तर्फ बाट होस् या केटीको तर्फ बाट आफ्नो जीवन साथीको उमेर अन्तर धेरै नहोस भन्ने चाहन्छन।धेरै जनाले आफ्नो लाइफ पार्टनरको उमेर अन्तर २ देखि ५ बर्षसम्म भएको उत्तम मानछन् ।
कतिपयले आफ्नो उमेर समूहकै व्यक्तिसंंग विहे गर्न चाहान्छन् । हुनत पछिल्लो समय केटाले आफूूभन्दा जेठी उमेर भएकी संग विहे गर्न लागेको पनि देखिएको छ । तर यो अलिक कम नै देखिने गरेको छ ।
पहिला–पहिला भने विवाहा गर्दा केटा र केटीको उमेर अन्तर धेरै नै हुने गथ्र्यो, आठ–दस बर्षको उमेर अन्तर र कसै (कसैको भने त्यो भन्दा बढी पनि तर आज भोलि नेपाली समाजमा यति धेरै उमेर अन्तर भएर विवाह गर्ने चलन धेरै नै कम हुदै आएको छ।
धेरै उमेरको व्यक्तिसंग विवाहा गर्दा मन नमिल्ने, कुरा नमिल्ने, विचार नमिल्ने मन मुटाब हुने, झगडा हुने, सम्बन्ध नै छुट्ने जस्ता समस्या आउछन त्यसैले विवाहा गर्दा आफ्नो जीवन साथीको उमेर अन्तर धेरै नहोस भन्ने चाहना हुन्छ।
तर केहि व्यक्तिहरुले भने उमेर भनेको एउटा नम्बर मात्र हो भनेर मन मिले सबै कुरा मिल्छ भन्ने सोचले विवाहा गर्दा आफूभन्दा धेरै नै उमेर अन्तर भएका केटा वा केटीसंग विवाह गर्ने गरेका छन्।
यहाँ हामीले नेपाली सेलिब्रेटी क्षेत्रमा रहेर योगदान दिएका केही त्यस्तो जोडीहरुको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ, जसको कपलवीचको उमेर सामान्य भन्दा अलिक बढी नै रहेको देखिन्छ ।
१. महानायक राजेश हमाल र मधु भट्टराई
महानायक राजेश हमाललाई नचिन्ने त सायद नै होलान। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्तो गर्दै अहिलेको स्थरसम्म पुराउन उनको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । उनलाई दिएको महानायक उपाधि माथि बेला–बेलामा विवाद पनि उठ्ने गरेको छ।
यस्तै केहि समय अघि नायिका दिपा श्री निरौलाले महानायक विरुद्ध आवाज उठाएकी थिइन । उक्त आवाजमा भने दर्शक निकै रिसाएका थिए ।
विवाह भन्दा पहिले महानायक राजेश हमाललाई चाहाने युवतीहरुको कमी थिएन । उनले विवाहा नगर्दा हमालले कहिले बिहे गर्छन भनेर धेरै प्रस्न उठ्ने गरेको थियो किनभने उनले झण्डै ५० वर्षको हाराहारीमा मात्र विवाह गरे भने आफु भन्दा दुई दशक भन्दा धेरै कान्छी मोडल मधु भट्टराईसँग विवाह गरे।
महानायक हमाल र मधुको उमेर अन्तर २२ बर्ष रहेको छ। करिब ७ बर्षसम्म प्रेममा रहेर उनीहरुले विवाहा गरेका हुन्।
२. करिष्मा मानन्धर र विनोद मानन्धर
केहि दिन अगाडी मात्र करिश्मा मानन्धरलाई महानायिका घोषणा गरिएको थियो । यस्तै महानायिका करिष्मा मानन्धरको पनि निर्माता विनोद मानन्धरसंग प्रेम पश्चात विवाह भएको हो ।
केही समय सँगै काम गरेपछि अचानक करिष्माले नै विनोदलाई विवाहको प्रस्ताव राखेकी थिईन् ।
विवाह हुने समयमा करिष्मा १८ बर्षकी थिईन् भने विनोद ३८ बर्षका थिए ।
यस हिसाबले उनीहरुको उमेरमा पनि दुई दशकको फरक छ । एक छोरीको अभिभावक यो जोडीलाई पनि उमेरको अन्तरले खासै असर नपरेको देखिन्छ। उनीहरुको वैवाहिक जीवन पनि सुखमय चलिरहेको छ।
करिश्माकी छोरी कविताले पनि होम प्रोडक्सन बाट नेपाली फिल्ममा नायिकाको रुपमा डेब्यू गरिसकेकी छिन। महानायिका करिश्मालाई सदाबहार नायिका पनि भन्ने गरिन्छ।
३. मिथिला शर्मा र मोतीलाल बोहोरा
ढिलो विहे गर्नेहरुको लिस्टमा अलिक फरक तरिकाको स्थान पाएकी छिन् अभिनेत्री मिथिला शर्मा । शर्माले बुढेशकालमा ७४ वर्षिय मोतीलाल बोहोरासँग विवाह गरेर सबैलाई चकित बनाईदिईन् ।
उनले चार दशक पार गरेपछि लगन गाँठो कस्नु सबैको लागि आश्चर्य थियो । ५० बर्षिय अभिनेत्री मिथिलाले आफूभन्दा २४ बर्ष जेठा मोतिलालसँग विवाह गरेकी हुन् । बुढेशकालमा सुरु भएको प्रेमलाई उनीहरुले विवाहको रुप दिएका हुन् ।
मिथिलासँग विवाह गर्नुभन्दा एक बर्ष अघि मात्रै बोहोराकी श्रीमतीको निधन भएको थियो । मोतीलाल नेपाल प्रहरीका पूर्व आई जिपि हुन् । उनीहरुको दुई बर्ष अघि विवाह भएको हो । उमेर पचपन्न दिल बचपन भन्ने उखान मिथिला शर्माको जोडीलाई लागू भएको देखिन्छ ।
४. शिव श्रेष्ठ र श्रृजना श्रेष्ठ
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कुनै समयका चर्चित नायकको रुपमा चिनिन्छन अभिनेता शिव श्रेष्ठ । उनले अभिनय गरेका दर्जन बढी फिल्महरु सुपर हिट छन्। उनले पाकिस्तानका फिल्ममा पनि अभिनय गरेका छन् भने पाकिस्तानमा ‘शिवा’नाम ले दर्शक माझ निकै लोकप्रिय थिए र अहिले पनि छन्।
बहुविवाह र कान्छी उमेरको श्रीमती ल्याउने अभिनेता मध्ये उनि पनि एक हुन्। उनले गंगादेवि श्रेष्ठसंग २०२८ सालमा विहेबारी गरेको भएपनि धेरै समय सम्बन्ध टिक्न सकेन ।अन्ततः उनले चितवन रामनगरकी श्रृजना श्रेष्ठ संग विवाह गरे । उनकी दोस्री श्रीमती शिव भन्दा २२ वर्ष कान्छी छिन् ।अहिले उनीहरुकोे सम्बन्ध स्मूथली अघि बढीरहेको देखिन्छ ।
५. निश्चल बस्नेत र स्वस्तीमा खड्का
नेपाली सिने जगतका चर्चित जोडी हुन निश्चल बस्नेत र स्वस्तीमा खड्का । उनीहरुको जोडिलाई धेरैले यूनिक जोडी भनेर पनि मान्ने गर्दछन् । यी दुई जनाको जोडीको विषयमा एक कमेडी बजारमा निकै भाइल बन्यो ।
हास्यकलाकार सन्दिप क्षेत्रीले चलाउने ह्वाट द फ्ल्प कार्यक्रममा निश्चनलाई सन्दिपले सोधेका थिए– तपाईले जुन यो हिराइन विहे गर्नुभएछ, के आफ्नै फोटो पठाएथ्यो ? त्यसमा हास्दै निश्चलले आफै स्वयं नै गएका बताएका थिए । उक्त भिडियोको क्लिप सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल पनि बन्न पुग्यो । विशेष गरी टिकटकमा ।
लुटका निर्देशक निश्चल बस्नेतले पनि आफूभन्दा १४ वर्ष भन्दा बढी कान्छी उमेरकी स्वस्तीमासंग विवाह गरेका हुन् । एकअर्काको साथमा रमाउन सक्यो भने उमेरले केही पनि फरक पार्दैन भन्दै यो जोडी अघि बढिरहेको छ । एकअर्काको उमेरमा भएको अन्तरले कुनै पनि समस्या नपरेको भन्दै यो जोडी आजको मितिसम्म खुशी छन् ।
आफ्नो वैवाहीक सम्बन्धको बारेमा उनीहरुले मिडियासँग पनि धेरै पटक भनिसकेका छन् । नायिका स्वस्तीमा २१ बर्षकी भइन् भने निश्चल ३४ वर्षका भए । निश्चल करिअरमा सफल र स्थापित भईसकेका छन् भने स्वस्तीमा करिअरको सुरुवातमै छिन् ।
जे होेस, विवाह गर्नुको मुख्य उद्धेश्य भनेको जीवनका सुख दुःखमा सँगै साटने सारथी बन्नु र बनाउनु हो । हामी यी सबै सेलिव्रेटीलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिन चाहान्छौँ ।
संघ र प्रदेशबाट एमाले बाहिरिनु हाम्रो लागि गर्वः प्रचण्ड
युवाहरुको चाहनाले केपी ओलीको खम्बा बन्न केन्द्रीय सदस्य लड्दैछुः दुर्गा प्रसाई
मध्यरातमा एमालेले गर्यो कस्तो नयाँ निर्णय, भीम रावलको सपना चकनाचुर
प्यानल घोषणाको तयारीमा भीम रावल, को–को छन् उनको टिममा ?
अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी पर्छ : भीम रावल
फागुन महिनासम्म एमालेको पार्टी प्रवेश महाअभियान चल्नेछ : ओली